पशुपति शर्मा Archives - Lokpati.com
Tag - पशुपति शर्मा
काठमाडौं, ३ बैशाख । सोमबार विभिन्न विधामा योगदान र्पुयाएका १ सय ४३ जनालाई सम्मान गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सुचीमा चर्चित लोक दोहोरी गायक पशुपति शर्माको पनि नाम थियो । तर, उनी पदक थाप्न शीतल निवास गएनन्...
‘पशुपतिकाे गीत जनताले मन पराएनन्’ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ८ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गायक पशुपति शर्माको भाइरल गीत ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ युट्युबबाट हटाइएको बारे पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बुधबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै...
पत्रकारको प्रश्न – पशुपतिको गीतले कांग्रेस जोगिएला ?
काठमाडौं, ७ फागुन । ‘लुट् कान्छा लुट् बोल’को गीतका गायक पशुपति शर्माको गीतले संसददेखि सडकसम्म बहस र तरङ्ग पैदा गरेको छ । आज भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि पशुपति...
काठमाडौं । हालै सार्वजनिक पशुपति शर्माको स्वर रहेको व्यङ्ग्यात्मक गीत लुट्न सके लुट् कान्छा यतिखेर जताततै चर्चामा रहेको छ । गीतमा प्रयुक्त शब्दहरुले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई व्यङ्ग्य गरेको भन्दै सो गीतलाई युट्युब...
प्रचण्डलाई पशुपति शर्माको गीत मन परेपछि…
काठमाडौं, ६ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गायक पशुपति शर्माको गीत बन्द गराउने सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्ट भएको बताएका छन् ।
उक्त प्रकरणलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका...
पशुपति शर्माले गरे यस्तो खुलासा
काठमाडौं, ६ फागुन । लोकगायक पशुपति शर्माले आफू देशको नागरिक भएका हिसाबले सरकारलाई जनताको तहबाट सचेत गराउन पाइन्छ कि भनेर मात्रै आफूले गीत गाएको बताएका छन् । उनले देश लुट्न कसैले पनि पाउँदैन भन्ने सन्देश दिन आफूले यस्तो गीत...
पशुपतिलाई २५ हजार दिन्छु भनेपछि संसदमा हंगामा
काठमाडौं, ६ फागुन । युट्युबबाट हटाइएको पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट’ बोलको गीतको बहस संसदमा पनि पुगेको छ ।
सोमबार बसेको संसदको बैठकमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले जनताको हितका लागि गीत गाएको भन्दै २५ हजार दिने घोषणा गरे...
‘पशुपति शर्माको गीतलाई दण्डित होइन पुरस्कृत गरियोस्’: बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं, ६ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पशुपति शर्माको गीतलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आइतबार उक्त गीतसहितको एउटा ट्वीटगर्दै डा.भट्टराईले लोकगायक पशुपति शर्माको...
पशुपति शर्मालाई ओमकुमारीकाे खुला पत्र
तिमीसँग प्रत्यक्ष भेट हुने अवसर मिल्दैन । चाहेर पनि तिमीलाई भेट्न सकिँदैन । एकाध कार्यक्रम बाहेक तिमीसँग प्रायः साक्षात्कार हुने अवसर पनि जुट्दैन । मलाई थाहा छ तिमी अलिक व्यस्त...